Iindiza ezisuka eKazakhstan zisiya eMaldives kwiAir Astana ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iindiza ezisuka eKazakhstan zisiya eMaldives kwiAir Astana ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuqhekeka kweendaba zaseKazakhstan • Ukwaphula Iindaba zeMaldives • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Bonke abakhweli, kubandakanya nabo bagonywe ngokupheleleyo, bafuna isatifikethi sokuvavanywa kwePCR esingalunganga ngesiNgesi ukuze bangene kwiRiphabhlikhi yaseMaldives. Ukongeza, abakhweli kufuneka bagcwalise isiBhengezo sezeMpilo sabaHambi kwiiyure ezingama-24 ngaphambi kokuba bahambe.
I-Air Astana yazisa ngeenqwelo moya ngokuthe ngqo ukusuka eAlmaty, Kazakhstan ukuya eMaldives.
I-Kazakhstan eya kwiinqwelomoya zeMaldives ziya kuqhubeka ngo-Okthobha 9, 2021.
Indlela yeAir Astana Maldives iya kulungiswa ngenqwelomoya iAirbus A321LR kunye neenqwelo moya zeBoeing 767.
I-Air Astana iya kuphinda iqale ngqo ngeenqwelomoya ukusuka eAlmaty ukuya eMaldives eMaldives ngo-Okthobha 9, 2021.
Inqwelomoya yeAirbus A321LR kunye neBoeing 767 ziya kusebenza kwindlela yeAlmaty-Male amatyeli amane ngeveki ngooLwezibini, uLwesine, iMigqibelo nangeeCawa.
Inzululwazi yasemoyeni Iinqwelomoya ebezisebenza ngaphambili kwi Maldivs ukusukela nge-5 kaDisemba ngo-2020 kude kube ngoMeyi 24, 2021, ngaphambi kokumiswa ngenxa yezithintelo zikarhulumente.
Bonke abakhweli, kubandakanya nabo bagonywe ngokupheleleyo, bafuna isatifikethi sokuvavanywa kwePCR esingalunganga ngesiNgesi ukuze bangene kwiRiphabhlikhi yaseMaldives.
Ukongeza, abakhweli kufuneka bagcwalise iSibhengezo seMpilo yabaHambi kwiiyure ezingama-24 ngaphambi kokuba bahambe.
Amaphepha-mvume okundwendwela aya kukhutshwa simahla xa ufika kwisikhululo senqwelomoya saseMale.
Ekubuyeni kwabo eKazakhstan, bonke abakhweli kufuneka babe nezatifikethi ze-PCR ezingezizo, ngaphandle kwabo bagonywe ngokupheleleyo.
U-Air Astana ngumphathi weflegi yaseKazakhstan, esekwe kwi Almaty.
I-Air Astana isebenza ngeenkonzo ezicwangcisiweyo, zasekhaya nezamazwe aphesheya kwiindlela ezingama-64 ezisuka kwindawo yayo ephambili, kwisikhululo seenqwelomoya iAlmaty, nakwiziko laso lesibini, iNursultan Nazarbayev International Airport.
Isikhululo senqwelomoya iAlmaty International, esasisakuba yiAlma-Ata Airport, sesona sikhululo seenqwelomoya esikhulu kumazantsi mpuma eAlmaty, esona sixeko sikhulu kunye nekomkhulu lezorhwebo laseKazakhstan.
Isikhululo senqwelomoya iAlmaty International sesona sikhululo seenqwelomoya e-Kazakhstan, esibalelwa kwisiqingatha sabakhweli beli lizwe kunye ne-68% yezithuthi zempahla.
Umongameli wase-Skål Asia: Dibana nomgqatswa u-Andrew J. Wood